ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးရလဒ်ကို အားရကျေနပ်မှု လုံးဝမရှိလို့ အန်အယ်လ်ဒီပြော၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ တစ်သောင်းကျော်၊ မြောက်ကိုရီးယားက ဒုံးကျည်နှစ်စင်း စမ်း အပါအဝင် မတ်လ ၂၁ ရက်မနက်ခင်းသတင်းများ
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးရလဒ်ကို အားရကျေနပ်မှု လုံးဝမရှိလ...
21 มี.ค. 2563 - 09:41 น.
ဒါကလည်း တပ်မတော်နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီတို့က တူညီတဲ့ပြင်ဆင်ချက် တင်သွင်းလို့ နှစ်ဖက်လုံးက ထောက်ခံမဲပေးတာကြောင့် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံမဲနဲ့ ပြင်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးရလဒ်ကို ဒီထက်မကမျှော်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး တပ်မတာ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ပြင်ဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထိုက်တဲ့အချက်တွေကို ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာ တစ်ကြိမ်မကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီက အမတ် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
"ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ အတူလက်တွဲပြီးတော့ အများကြီး ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ရလဒ်ကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ ပြည်သူတွေကလည်း အင်မတန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကို။ အဲဒီတော့ စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ အားမလိုအားမရ မချိတင်ကဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့လုံး၀ စိတ်မကောင်းပါဘူး" လို့ သူက ပြောပါတယ်။
မြန်မာလွှတ်တော်ထဲက ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး မှတ်မှတ်သားသား ဆွေးနွေးချက်များ
"ဖွဲ့စည်းပုံကို စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုအချက်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ချင်တာလဲ။ ဘယ်လိုအစိတ်အပိုင်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ချင်တာလဲ။ ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ ချင့်ချိန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အချက်တစ်ချက်ကိုတော့ ပြည်သူတွေ သတိထားမိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်"လို့ သူကပြောပါတယ်။
သူဟာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး လွှတ်တော်ထဲမှာ ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ၄၅ ဦးကော်မတီရဲ့ အတွင်းရေးမှူးလည်း ဖြစ်သလို ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ ပြောခွင့်ရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခု အန်အယ်လ်ဒီက ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကြိုးပမ်းချက်ဟာ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အများပြောနေကြသလို တပ်မတော်နဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး ကပြောပါတယ်။
"ဘာအတွက်ဆောင်ရွက်တာလဲ တစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်။ နိုင်ငံ့အတွက်၊ ပြည်သူ့အတွက်၊ ငြင်းကြတယ် ခုန်ကြတယ်။ ဒါက ဒီမိုကရေစီရဲ့ ကျင့်စဉ်ပဲ။ ဒါဖြတ်သန်းမှုတစ်ခုပဲ။ ဒါက အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကိုထိခိုက်လားဆိုရင် နောက်တစ်ခုပါ ကျွန်တော်ဖြေရမယ်။ အဲဒါက တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို လျှော့ချဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာလားဆိုတာပေါ့။ စာမေးပွဲတစ်ခုမှာ ရမှတ်က ၇၅ မှတ်ကျော်မှ အောင်မယ်။ အဲဒီမှာ ၂၅ မှတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ ဒါက တပ်မတော်မှမဟုတ်ဘူး။ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် ပေါ့နော်။ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့လည်းမညီဘူး။ တရားမျှတမှုလည်းမရှိဘူးပေါ့။ ဒါကိုတော့ ပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက် အစစ်အမှန်ရသည်အထိ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်" လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မပြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကို သက်သေပြဖို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်သလို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်နဲ့ လူသားဆန်မှုအပေါ် ယုံကြည်ပြီး ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာကနေ ပြင်လို့မရဘူးဆိုတာ သိသွားအောင် လုပ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ကြောင်း ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးက ပြောပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဒီလောက်ခက်မယ်မထင်ဘူးလို့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီရဲ့ ရှေ့ပိုင်းက ပြောကြားချက်တွေအပေါ် တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူး မျိုးထက်ဝင်းက နိုင်ငံရေးအောက်လုံးမထိုးဖို့နဲ့ အဲဒီကနေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေက အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ တုံ့ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးဒီရလဒ်ကိုကြည့်ရင် အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရရဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုး က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီရလဒ် ထွက်လာတာကို အန်အယ်လ်ဒီက မမျှော်လင့်ထားဘူးလို့ ပြောတဲ့အပေါ် သူအပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကဲခတ် တွေက ပြန်ပြီး အံ့အားသင့်ရတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
"ဒီရလဒ်ထွက်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့က ကြိုသိပြီးသား။ အန်အယ်လ်ဒီဘက်က ကော်မတီစဖွဲ့တည်းက တပ်မတော်က တစ်စိုက်မတ်မတ် ကန့်ကွက်နေတာ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကန့်ကွက်တယ်။ ဒီကိစ္စက ဘယ်သူမှအမြတ်မထွက်ဘူး။ အကုန်ရှုံးပါတယ်။ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမညှိနိုင်တဲ့အတွက် အန်အယ်လ်ဒီ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေလည်း ရှုံးတယ်။ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေလည်းရှုံးတယ်။ တပ်မတော်လည်း ရှုံးတယ်" လို့ ဦးမောင်မောင်စိုးကပြောပါတယ်။
(၂) ငယ်ရွယ်သူတွေ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကို အလေးထားဖို့ WHO သတိပေး
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကို အထိခိုက်ဆုံး ဖြစ်ပေမယ့် ငယ်ရွယ်သူတွေလည်း မလွတ်နိုင်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ငယ်ရွယ်သူတွေကိုလည်း အလွတ်မပေးတဲ့အတွက် လူစုလူဝေးနဲ့ အသက်အရွယ် ကြီးသူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်သွယ်ခြင်းကို ရှောင်ဖို့လိုတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကြား ကူးစက်ခံရမှုပိုများပြီး ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများတာကြောင့် နိုင်ငံတော်တော်များများက ငယ်ရွယ်သူတွေဟာ ကျန်းမာရေးသတိပေးချက်တွေကို အလေးမထားဘဲ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် WHO အကြီးအကဲက ခုလို သတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
"လူငယ်တွေအတွက် ကျွန်တော် သတင်းစကားတစ်ခု ပါးချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို အနိုင်ရမနေပါဘူး။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ခင်ဗျားတို့ကို ဆေးရုံ တစ်ပတ်လောက် တက်ခိုင်းထားနိုင်ပြီး သတ်တောင်သတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားက မဖျားမနာဘူးဆိုရင်တောင် ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့် ခင်ဗျားသွားလာတဲ့နေရာကလူတွေရဲ့ အသက်ရှင်ရေးကို ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်" သူကူ ထပ်ပြီးဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
(၃) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၁,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီ
ဒီဗိုင်းရပ်စ် စဖြစ်ခါက ဒီဇင်ဘာတုန်းကတော့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့ရာဗဟိုချက်မဟာ တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဥရောပဟာ ကပ်ရာဂါရဲ့ဗဟိုချက်မဖြစ်လာပါပြီ။
အီတလီမှာဆိုရင် သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး မနေ့က မတ်လ ၂၀ ရက်တစ်ရက်တည်းမှာပဲ သေဆုံးသူ ၆၂၇ ဦးရှိခဲ့လို့ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ၄,၀၀၀ ကျော် သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က တစ်ရက်တည်း သေတဲ့နှုန်းဟာ အီတလီမှ ဒီဗိုင်းရပ်စ် စဖြစ်ကတည်းကနေ အခုထိ သေဆုံးမှုအများဆုံးနှုန်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကလည်း ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုအသစ်တွေ တိုးလုပ်လာနေပါတယ်။
ကိုရိုနာကြောင့် သေဆုံးမှုအများဆုံး အီတလီဖြစ်လာ
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က ကော်ဖီဆိုင်တွေ၊ အဖျော်ယမကာဆိုင်တွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေကို မနေ့ကညပိုင်းကစပြီး ပိတ်ခိုင်းလိုက်ပါပြီ။
အမေရိကန်က မက္ကဆီကိုနဲ့ ကနေဒါ နယ်စပ်တွေကို ပိတ်တော့မှာပါ။ ဒါ့အပြင် နယူးယောက်နဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ မဖြစ်မနေကိစ္စကလွဲလို့ အိမ်အပြင်မထွက်ကြဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။
စပိန်မှာ အပြင်ထွက်သူတွေအနေနဲ့ အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ရင် ဖမ်းဆီးခံရမယ်လို့ အစိုးရက သတိပေးထားပါတယ်။
ဂျာမနီက ဒုတိယလူနေအထူထပ်ဆုံး ဘာဗေးရီးယားပြည်နယ်ဟာ ပထမဆုံးအဝင်အထွက်ပိတ်လိုက်တဲ့ ပြည်နယ် ဖြစ်လာပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာတော့ လာမယ့် သတင်းပတ်ကုန်မှာ လူတွေ ခရီးသွားလာတာကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ဖို့ ပဲရစ်က ဘူတာရုံတွေမှာ လှည့်ကင်းတွေ ပိုချထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား မြို့တော် ဂျာကာတာကို လာမယ့် တနင်္လာနေ့ကစလို့ အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ဘားတွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့ တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပိတ်ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးမှုက အီတလီမှာ ၄,၀၀၀ ကျော်၊ တရုတ်မှာသေဆုံးသူ ၃,၂၀၀ ကျော်၊ စပိန်နဲ့ အီရန်တို့မှာ ၁,၀၀၀ ကျော်နဲ့ အမေရိကန်မှာ ၂၂၀ ကျော် ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) မြောက်ကိုရီးယားက ဒုံကျည်နှစ်စင်း စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်တယ်လို့ဆို
မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကို ပင်လယ်ထဲ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။
ဒီဒုံးကျည်တွေဟာ တာတိုပစ်ဒုံးကျည်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒီဒုံးကျည်တွေကို စနေနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာ ပြုံးယမ်းကနေ ဂျပန်ပင်လယ်လို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ အရှေ့ပိုင်းပင်လယ်ထဲ ပစ်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဒီလအစောပိုင်းတုန်းကလည်း ဒုံစစ်ရေးလေ့ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ ဒုံးလက်နက်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်တို့က နျူလက်နက်နဲ့ ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေ အဆုံးသတ်ရေး ဆွေးနွေးဖို့ မြောက်ကိုရီးယားကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားရဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲက ဒုံးကျည်တွေ ထပ်ပစ်လာနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံး ကိုဗစ်၁၉ ကပ်ရောဂါကို အကြီးအကျယ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ ဒီလုပ်ရပ်က လုံးဝမသင့်တော်တဲ့လုပ်ရပ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ကလည်း ဒုံးကျည်တစ်စင်းဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်ရေပိုင်နက်အပြင်ဘက်ကို ကျရောက်ခဲ့တယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးရလဒ်ကို အားရကျေနပ်မှု လုံးဝမရှိလို့ အန်အယ်လ်ဒီပြော၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ တစ်သောင်းကျော်၊ မြောက်ကိုရီးယားက ဒုံးကျည်နှစ်စင်း စမ်း အပါအဝင် မတ်လ ၂၁ ရက်မနက်ခင်းသတင်းများ